Musharixiinta oo dacwad ka dhan ah Farmaajo u gudbiyay dowladda Qatar - Awdinle Online
Musharixiinta oo dacwad ka dhan ah Farmaajo u gudbiyay dowladda Qatar
Xubno ka tirsan Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa habeenkii xalay aheyd kulan gaar ah la qaatay qaatay Ergeyga Gaarka ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Qatar u qaabilsan dhex dhexaadinta xalinta khilaafaadka Dr. Mutlaq Al-Qahtani oo ku sugan Magaalada Muqdisho.
Inta uu socday kulanka dhexmaray Ergeyga iyo Musharaxiinta ayaa looga wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee siyaasadda Cakiran ee dalka, marxalada kala guurka iyo khilaafka ka taagan qabsoomida doorashada dalka ka dhaceysa.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo oo la hadlay Idaacadda Dalsan ayaa u sheegay in arrimaha kulanka lagu soo hadal qaaday ay ku jireen taageerada Dowlada Qatar la garab taagneed Madaxweynaha muddo xilleedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Taliyaha hay’addaha Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka NISA Fahad Yaaasin.
Musharaxiinta ayaa Dr. Mutlaq Al-Qahtani u sheegay in Qatar ay ku eedeynayaan in afartii sano ee la soo dhaafay taageero la garab taagnayd Madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, isla markaana u sheegay in la dhibaateeyay Shacabka Soomaaliyeed, waa sida la yiri.
Sidoo kale Musharaxiinta ayaa Qatar iyo Turki ku eedeeyay in qalabkii iyo hubkii ay ugu deeqeen ciidanka Soomaaliya uu Farmaajo u adeegsaday cabburinta shacabka iyo weerarka mucaaradka gaar ahaan Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, iyo dadweyne banaanbaxayey oo hogaaminayeen siyaasiyiinta Mucaaradka, gaar ahaan weerarkii guriga C/raxmaan C/shakuur 17 December.
Golaha ayaa Ergeyga Gaarka ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Qatar u qaabilsan dhex dhexaadinta xalinta khilaafaadka u caddeeyay in xalka iyo kalsoonida uu ku soo laaban karto oo kali ah in Farmaajo kursiga baneeyo, uuna isaga baxo Madaxtooyada.
Musharaxiinta ayaa Dr. Mutlaq Al-Qahtani ka dalbaday in dowladiisu kala shaqeyso Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble sidii uu u qaban lahaa Doorasho xur iyo xalaal ah oo sida ugu dhaqsiyaha badan u dhacda.
Next articleTaliyaha Booliska oo Amar siiyay Ciidamada kadib hadalkii Mucaaradka